हामी यन्त्रमानवहरु ~ brazesh
May 08, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ५८
अलि अघिकै कुरा हो, एक जना मित्रले त्यस्तै सन्दर्भमा भनेका थिए,
“एक हप्तामा मैले एउटा न्वारान, एउटा व्रतवन्ध, एउटा बिहे, एउटा सम्बन्ध विच्छेद र एउटा मृत्युको घटनामा सहभागी हुनु प¥यो । अर्थात्, मान्छेका जीवनमा हुने सबै महत्वपूर्ण घटनाहरु ।”
त्यतिबेला साधारण रुपमा लिएर पन्छाएको त्यो टिप्पणी त्यसको निकै समय पश्चात् अनायासै सम्झनुको पछाडि एउटा कारण छ । केही दिन अघि अप्रत्याशित रुपमा एउटा दुखद समाचार सुन्नु परेको थियो । अहिलेको समयमा भेटघाट, भलाकुसारी र उठवस नभए पनि कुनै बेला अत्यन्त नजीकबाट संगत गरेको एक जना सहकर्मीको निधन भयो । खवर सुनेर अस्पताल पुग्दा त्यहाँ थुप्रै मानिसहरुको भीडभाड लागिसकेको थियो । यस्तो भीडमा संधै दुइ गरि मानिसहरु देखिन्छन् । एक थरि मानिसहरु, जसलाई साँच्चै नै दुःख लागेको हुन्छ । अर्का थरि मानिसहरु, जसलाई खासै केही पनि फरक परेको हुँदैन । मात्र अनुहार देखाउन र आफ्नो उपस्थिति जनाउनका लागि मात्र त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ती दोश्रो वर्गका मान्छेहरु । ती मानिसहरुलाई आफूले त्यहाँ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पनि मतलब हुँदैन । उनीहरु त्यहाँ मानौं जनसम्पर्क कायम गर्नका लागि र अरु बेला नभेटिने मान्छेहरुसंग म्याद गुज्रन लागेका सम्बन्धहरु नवीकरण गर्नका लागि आएका हुन्छन् । कान देखि कानसम्म टन्सिलै देखिने गरी हाँस्दै आएर त्यस्ता मानिसहरु तपाइंसंग जोशिएर हात मिलाउँछन्, तपाइं आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी चाहन्छन् । कोहीकोही त ख्यालठट्टा समेत गरिरहेका पनि देखिन्छन् । त्यस्ता मान्छेहरु ‘के गर्नु, खवर सुनेपछि आइदिनै प¥यो’ भन्न समेत पछि पर्दैनन् । मानौं त्यहाँ आइदिएर उनीहरुले मृतक र उनका परिवार प्रति कुनै ठूलो गुन लगाएका हुन् । यस्तो भान हुन्छ, कतै ती मानिस नआएका भए मृतकको आत्माले वैतरणी नदी पार गर्न सक्ने थिएन ।
पशुपतिको जात्रामा सिद्राको व्यापार भने जस्तो आडम्वरको आडमा मान्छेहरु आफ्ना अन्य गुह्य कारणका लागि जहाँ पनि पुग्नु पर्ने यो कस्तो वाध्यता हो ? स्वर सम्राट नारायणगोपालको निधन भएको बेलाको एउटा त्यस्तै स्मरण यहाँ नेर उल्लेख गर्न मन लागेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा आयोजित शोक सभामा एक जना ‘वरिष्ठ’ (हामीकहाँ वरिष्ठ भन्नाले कसले कति उल्लेख्य काम गरेको छ भन्दा पनि कसले कति उमेर त्यो पेशामा बिताएको छ भन्नेले त्यसको निर्भारण गर्ने चलन छ) अभिनेत्री नारायणगोपालको सालिक बनाउनु पर्छ भनेर आक्रामक हिसाबले प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनको त्यो भनाइबाट प्रभावित भएर उनी प्रति आदर भाव जागृत हुन थालेको थियो । तर अर्को वाक्यमा सालिक बनाउनु पर्ने जुन कारण उनले खोलिन्, त्यसले गर्दा त्यो शिशु आदर निर्माण मापदण्ड पूरा नभएको कुनै घर भूइँचालोमा ढले जस्तो धराशायी हुन गएको थियो । कलाकारको सालिक बनाउने प्रथाको सुरुवात भयो भने भोलि आफू मरेपछि आफ्नो पनि सालिक बन्छ भनेर उनले भनेकी थिइन् । नारायणगोपाल प्रतिको श्रद्धा नभै उनको आफ्नो स्वार्थ बोलेको थियो त्यतिबेला ।
अघि उल्लेख गरेको दिन पनि भीडमा यो वर्गका महान र परोपकारी मानिस थिए । एक जना त्यस्ता स्वनामधन्य मानिस एउटा सानोतिनो हूल आफ्नो वरिपरि राखेर भाषण गर्ने शैलीमा फलाकिरहेका थिए । न मृतक र तिनका आफन्तहरुसंग उनको कुनै निकट नाता वा सम्वन्ध थियो । तै पनि उनी अब मृतकका पति टुहुरो भएको भन्दै सहानुभूति प्रकट गर्दै थिए । बेलाबेला उनी आफ्नो गला रुग्ण बनाउने जमर्को पनि गरिरहेका थिए । त्यसको केही बेरमै उनी लामो समय पछि भेटिएका कुनै परिचितसंग ख्यालठट्टा गरिरहेको देखिए । औपचारिकताका नाममा अभिनय गर्न वाध्य आजका मानिसहरुको तिनी प्रतिनिधि पात्र थिए सायद ।
त्यही दिन साँझ एउटा कुनै संस्थाले आफ्नो उपलव्धिको हर्ष बाँड्नका लागि आयोजना गरेको एउटा ककटेल पार्टीमा जानु पर्ने थियो । काठमाण्डौमा परिचित मानिसहरुको घेरा त्यति ठूलो छैन, त्यसैले हरेका जमघट र समारोहमा केही न केही नियमित अनुहारहरु एक आपसमा ठोक्किने गर्छन् । त्यो पार्टीमा पनि बिहान अस्पतालमा देखिएका केही साझा अनुहारहरु नदेखिने त कुरै भएन । ती अनुहार र यो स्तम्भकार आफै पनि त्यतिबेला फरक भूमिकामा भएकोले सोही अनुसार प्रसन्न हुनु पर्ने थियो । तर त्यो प्रसन्नताको पछाडि बिहानको पीडा पनि टाँसिएर रहेको थियो । एकै दिन दुइ विपरित अवस्थामा आफूलाई ढाल्नु पर्दा मगजमा एउटा कुराले खल्वल्याइरह्यो ।
यो आधुनिक समाजमा, आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मानिस जनसम्र्पक बिना टिक्न सक्दैन । जति बढी हाम्रो चिनजान, भेटघाट र सम्पर्क, त्यति नै धेरै अवसरका सम्भावनाहरु हुन्छन् । अनि जति धेरै अवसरहरु, त्यति नै धेरै उपलव्धिका ढोकाहरु पनि हाम्रो सामु खुल्छन् । उपलव्धिका साथै तिनले आफूसंग फेरि अरु सम्पर्क र सम्वन्धहरु ल्याउँछन् । मानिस आफ्नो दिनको चौवीस घण्टालाई भाग लगाउँदा लगाउँदा मिनेटमिनेटमा आफ्नो समयलाई टुक्रा बनाउन थालेको छ आजकल । मान्छे भनेको व्याट्रीबाट चल्ने खेलौना होइन । भनेको बेला भनेको जस्तो भावना जागृत गर्न उसले सक्दैन । तर आजकल हामी कुनै पनि मनस्थितिमा टिक्न भ्याउँदैनौं । अहिलेको समाज र जीवनशैलीले कतै हामीलाई कुशल तर सम्वेदनाहीन अभिनेता त बनाइरहेको छैन ? के यसले हामीलाई मानिसबाट यन्त्र बनाउँदै लगिरहेको त छैन ?
आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक समयका हामी यन्त्रमानवहरु ।